XOG: Ogow Qarashka lagu iibiyay dhismaha cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Ogow Qarashka lagu iibiyay dhismaha cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka...
XOG: Ogow Qarashka lagu iibiyay dhismaha cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka!
Dhismaha cusub ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka
Washington (Halqaran.com) – DF Soomaaliya ayaa shaacisay dalka rasmi ahaa laga iibsaday dhismaha cusub ee ay hadda dagtay Safaarada Soomaaliya ee dalka Mareykanka, kadib markii Madaxweyne Farmaajo xalay uu xariga ka jaray.
Dhismaha cusub ee Safaarada Soomaaliya waxaa lagu gaday qarash aad u fara badan sida uu sheegay Wasiirka Maaliyadda Somaliya oo ka hadlaayay goobtii Xariga looga jaraayay dhismaha Safaaradaasi oo xalay uu ku sugnaa.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Belye ayaa sheegay in dhismaha Safaaradda laga bixiyay lacag dhan 4.3 Milyan oo dollarka Mareykanka ah, lacagtaasina ay tahay hanti Qaranka Somaliyeed uu leeyahay.
Dhismahan cusub waxaa laga iibiyay dowladda Columbia oo deganaan jirtay, balse hadda Somaliya ka iibsatay.
Goobta Soomaaliya ay ka gadatay Safaarada cusub waxaa ku yaallo Safaarado kale oo dowladdo shisheeye ay ku leeyihiin Magaalada Washington, waana goob Istaraatiiji ah, marka la eego sida Safaaradaha ugu badan yihiin.
Dhismihii hore ee Safaarada Somaliya ee dalka Mareykanka ayaa waxaa gaday dowlada Mareykanka, kadib markii dhismaha Safaarada uu bur buray, xilligii Somaliya dowlad la’aanta aheyd aysana jirin cid ku shaqeysa, waxaana lacagtaasi la siiyay Soomaaliya.
dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka
Qarasha ku baxay